Nge ukuqala ehlobo, iyeke bayanda ukuthenga isiqandisi entsha. Kuze kube manje, emakethe endlu Imishini Ukukhetha nawo njengomnyango mkhulu kakhulu futhi kungathinta uhla enkulu hhayi kuphela, kodwa ukushintshwa ehlukahlukene ezintsha. Nokho, abaningi bathambekele ukuthenga is amafriji AEG, okuyinto libuyekeza njalo ukuheha amakhasimende ukuba lokhu brand.
Lokhu kungenxa yokuthi uye eside inkampani umise ngokwaso ezimakethe zesimanje ezenza, kodwa phesheya kuphela. abangu Siphinde inikezwe ukukhiqizwa beza muva nje. Ngesikhathi esifanayo, abanye abantu bakwazi ukuthenga esiqandisini AEG emuva nineties ngasekupheleni, kodwa ikakhulu kwaba ukusetshenziswa umshini, amazwe ezazivela ngaphandle. Kuyaphawuleka ukuthi ngisho isimo esetshenziswa njalo wasebenza, futhi abanye asasebenza. Lokhu kuwubufakazi obuphilayo izinga okusezingeni nokwethembeka okusezingeni eliphezulu.
imikhiqizo yamanje lenkampani cishe neze kunabayeni ababengaphambi zabo. Kunalokho sekuyinto okunokwethenjelwa nakakhulu, futhi izwe kwaqala ukuvela eziningi zosizo igxile. Ngakho-ke AEG Fridge ukulungiswa musa zibangele nezinkinga, ezaziyincithakalo ngaphambili.
Umehluko omkhulu phakathi kwalezi amayunithi kuyinto yezinga lazo eliphakeme futhi ikhono lokubekezelela amathonsi ezincane amanethiwekhi kagesi, okuyinto ngokuvamile zitholakala ezweni lethu. Futhi uzinake kuyinto ukusebenza lwabo olwengeziwe nokuhlangenwe manageability. Cishe wonke amamodeli yesimanje anemisila ehlukile control panel okuyinto hhayi kuphela elawula izinga lokushisa, kodwa futhi ungakwazi ukulawula neminye imisebenzi. Lokhu kukuvumela ukuba ulungise esiqandisini AEG ngamunye, ngaphansi kwezimo ezithile.
Lapho eqhathanisa intengo yemikhiqizo yenkampani nabanye, brand engengaphansi owaziwa, kuba sobala ukuthi lezi amafriji akakwazi ngokuthi eshibhe, kodwa ngesikhathi esifanayo, hhayi eqolo. Uma siqhathanisa ikhwalithi service yokuphila, esiqandisini AEG angabhekwa okungcono. Ikakhulukazi badla ku-akhawunti yokuthi ukuthenga okunjalo akukhona ukuthuthumela lapho unyaka noma ngisho emihlanu, esiphethweni iba sobala. Lokhu esiqandisini akuyona kuphela imali, kodwa ukusebenza eside futhi elingenazinkinga iba ukonga ngaphezulu.
Futhi banake yokuthi inkampani akugcini umthamo ngamayunithi angakahleleki. umkhiqizo wayo olukhethiwe lufaka amafriji bonke izikhathi futhi egumbini ngalinye. Ngesikhathi esifanayo kukhona imibala ehlukene nokusebenza ezihlukahlukene, ngokwemvelo kuthinta isidingo umthengi.
Ngokusho amakhosi service izikhungo ezahlukene, AEG efrijini kungenziwa njengelinye lamazwe enokwethenjelwa kakhulu. Kusukela ukulungiswa, yena uthola kakhulu kuyaqabukela, bese kuphela amaphutha amancane.
Ngakho, uma ufuna ukuthenga eliphezulu amafriji, nge ukulawula okuningi, kungcono ukwedlula AEG, akatholakali. Ngesikhathi esifanayo uyoba umklamo omkhulu, omkhulu ukuba sibhekane ngokuphumelelayo izici zabo futhi izothatha isikhathi eside kakhulu.